Sula emabhokisini ecacile ukusonga amabhokisi, ecacile amabhokisi emaphaketheni
Ngenxa umklami emaphaketheni ubhekene njalo ngifuna izindlela sokusungula ukusekela yokubeka uphawu yakho noma yakho amaklayenti 'futhi uthole imikhiqizo yabo waphawula eshalofini.
Sula amabhokisi plastic sikhangise imikhiqizo kahle, ukudala aesthetics okuthakazelisayo, futhi ukukhuthaza bezibona value-added. Futhi ukuba ukwazi ukudala eliyingqayizivele futhi amehlo ekubambeni imiklamo kwesakhiwo ingcaca, abaningi akunakwenzeka nge paperboard.
HLP Klearfold isekela wena zethu olungenakuqhathaniswa kwesakhiwo design ubuchwepheshe kanye esigcwele umbala prototyping okusheshayo amakhono ethu. Futhi sizobe ukusekela amaklayenti wakho nge ubuchwepheshe odonsa phambili, kanye zokweseka ezinkulu, ukwethulwa sezizwe ezihlukahlukene. Thina ninikeza imvelo-ayethanda APET, RPET kabusha okuqukethwe, futhi bio-PET ibhokisi amamaki, futhi yethu nokuphathelene Soft crease ® beshaya ubuchwepheshe kudala Klearfold ® amabhokisi plastic cacisa omnandi, Imigqa ehlanzekile ukuthi enze lemukelekako ku ezenzakalelayo imigqa ukugcwalisa.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe noma ukwesekwa ne ohlelweni lwakho design elilandelayo, sicela uthintane noMphathi wethu Ubuhlobo Creative, uKaren Werther, at 718 554-3271 noma karen.w@hlpklearfold.com.